नेताहरुलाई देउवाको व्यंग्य : प्रचण्डको नाम लिन सक्दैनन् विचराहरु ! - Kohalpur Trends
नेताहरुलाई देउवाको व्यंग्य : प्रचण्डको नाम लिन सक्दैनन् विचराहरु !
७ फागुन, नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिएका नेताहरुलाई प्रचण्डविरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै व्यंग्य गरेका छन् ।
उनले अघि भने, ‘प्रचण्डको नाम नै लिन सक्दैनन् विचराहरु !’ आफूले भने कांग्रेसलाई प्रचण्ड र ओली सबैको खिलापमा बोल्न सक्ने पार्टी बनाउन चाहेको देउवाले बताए ।
सबैले संविधान मिचेका छन्
Previous Previous post: जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै भिजन लुम्बिनीमा विवाद
Next Next post: मासुको मूल्य बढ्यो, खाद्यान्न र तरकारीको भाउ के भयो ?